Warmly Welcome: သက်ကြီးပိုင်း ရောက်သည်ထိ ဦးနှောက်စွမ်းအား ထက်မြက်နေအောင် ဘယ်လို စားသောက်မလဲ !!
သက်ကြီးပိုင်း ရောက်သည်ထိ ဦးနှောက်စွမ်းအား ထက်မြက်နေအောင် ဘယ်လို စားသောက်မလဲ !!
ဘယ်ရီသီး စားခြင်းသည် ဦးနှောက်စွမ်းအား ကို ပိုကောင်းစေ
ဘယ်ရီသီးများ စားခြင်းဟာ အသက်ကြီး လာလို့ ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ရုံ သာမက ဆက်လက် အစွမ်းထက် နေအောင်ပါ ကူညီပေး နိုင်တယ်လို့ သုတေသီ များရဲ့ တွေ့ရှိချက် တွေက ဖွင့်ဆို ထားပါသည်။
အထူးသဖြင့် ကော်ဖီသည် သက်ကြီးပိုင်းများ ဦးနှောက် စွမ်းဆောင်ရည် ထက်မြက် နေအောင် ကူညီ ပေးနိုင်သည်။ စဉ်းစား ဆင်ခြင်မှု ကောင်းအောင် ကူညီပေး နိုင်သည်။ ဦးနှောက် အတွင်း ၀င်လာသော အချက်အလက် များကို တုံ့ပြန်မှု ကောင်းအောင် ကူညီ ပေးနိုင်သည်။ တစ်သက်လုံး ကော်ဖီ သောက်လာ သူများ အတွက် သတင်းကောင်း ရှိပါသေးသည်။ ကော်ဖီကို နှစ်ကြာရှည် သောက်လာသူများ သည် အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါ ဖြစ်ပွား နိုင်ခြေ ကိုလည်း နည်းသွား စေကြောင်း သုတေသီများက ထောက်ပြ ခဲ့ကြသည်။
မှတ်ဥာဏ် မကောင်းဘူးလား ၊ ငါးကိုစား
ဦးနှောက်စွမ်းရည် ထက်မြက် လိုသူများ ငါးအမျိုးမျိုး ကို စားသုံးသင့်သည်။ မှတ်ဥာဏ် ကောင်းလို သူများ ငါးအမျိုးမျိုး စားသုံး သင့်သည်။ ငါးများတွင် ပါဝင်သော အိုမီဂါ ၃ အက်ဆစ်ဓာတ် သည် မှတ်ဥာဏ် ကောင်းအောင် ထိန်းသိမ်း ရာတွင် အရေးပါသော ဓာတ်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။
မနက်စာ ပုံမှန် စားခြင်းသည်လည်း မှတ်ဥာဏ် ကောင်းစေသော အလေ့အထဖြစ်
ကနေဒါနိုင်ငံ ၊ တိုရွန်တို မြို့တွင် ပြုလုပ် ထားသော လေ့လာ သုတေသန အရ အသက် ၆၁ နှစ်မှ ၇၉ နှစ်အကြား သက်ကြီးပိုင်း များထဲတွင် မနက်စာ ပုံမှန် စားသူများ သည် သက်ကြီးပိုင်း ရောက်သည့် အထိ ဦးနှောက်စွမ်းရည် မကျဆင်းအောင် ထိန်းသိမ်း နိုင်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိ ရသည်။ သက်ကြီးပိုင်း များတွင် သာမက ကလေးငယ် များမှာပင် မနက်စာ ပုံမှန် စားသုံးသူ များသည် စာမေးပွဲ ရလဒ်များ ပိုမို ကောင်းမွန် ကြသည်ကို လေ့လာ တွေ့ရှိရသည်။
ယမကာ တစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးဖြစ် ၀ါးဖြစ် မှီဝဲသူများ သက်ကြီးပိုင်း ရောက်သည်အထိ ဦးနှောက်စွမ်းရည် ကောင်းမွန်
အသက် ၆၀ အထက် လူကြီးပိုင်း များကို လေ့လာသည့် အခါ တစ်ပတ်ကို ဘီယာ ( သို့မဟုတ် ) ယမကာ တစ်မျိုးမျိုး ကို ၄ - ၅ ကြိမ်ခန့် ဆေးဖြစ် ၀ါးဖြစ် မှီဝဲသူများ သည် လုံးဝ မသောက်သုံး သူများထက် ဦးနှောက် စွမ်းရည် ကျဆင်းနိုင်ခြေ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ထိ ပိုနည်းကြောင်း တွေ့ထားရသည်။ တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုသော စကားရပ်ကို ဖြင့် သတိထားရမည်။ တစ်ပတ်ကို ၁၄ ခွက် နှင့် အထက် သောက်သုံးသူ လူကြီးပိုင်း များမူကား အသက်ကြီး သည့်အခါ ဦးနှောက် ယိုယွင်းမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများ နေပြန်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ရေနွေးကြမ်း သည်လည်း ဦးနှောက် စွမ်းရည် ထက်မြက်စေနိုင်
ရေနွေးကြမ်း သောက်သုံးခြင်း သည်လည်း လူကြီးပိုင်းများ ဦးနှောက် စွမ်းရည် နှင့် မှတ်ဥာဏ် ဆက်လက် ထက်မြက် နေစေရန် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှု များက ထောက်ပြ နေသည်။ ရေနွေးကြမ်း သည် ဦးနှောက်တွင်း မှတ်ဥာဏ် စွမ်းအင် ကောင်းမွန်ရေး အထောက်အကူ ပြုသည့် အဆီတိုင်လင်း ဓာတ်ကို မြင့်တက် စေသည်။ အစာချေ နိုင်စွမ်းကိုလည်း မြင့်တက် စေသဖြင့် အစာ မကြေခြင်း ကြောင့် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေး စေနိုင်သည်။
ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင် မဆလာ သည်လည်း အသုံးဝင်နိုင်
အီတလီ နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ် ထားသော လေ့လာမှု စစ်တမ်း တစ်ရပ် အရလည်း မဆလာ အပါအ၀င် အခြားသော ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင် များသည် လူကြီးပိုင်း များ၏ ဦးနှောက် စွမ်းဆောင် ရည်ကို ထက်မြက် နေအောင် ထိန်းပေးထား နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဦးနှောက်ကို ယိုယွင်း ပျက်စီး စေသော အောက်ဆီဒိုက် များကို တိုက်ဖျက် နိုင်သည့် အင်ဇိုင်း များကို ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင် များတွင် ပါသော ဓာတ်ပစ္စည်း များက တိုးပွား စေကြောင်း သိရသည်။
Eat for Better Memory:7ways to Get Sharp ( Reader's Digest )
Posted by Welcome at 4:13 PM
Labels: ကျန်းမာရေးအသိ, မျှဝေခြင်း, ရိုးရာအစားအစာ, အလှစာ၊
Me Vision's Blog
ညရဲ့ကောင်းကင် (My Diary)
ဘင်လာဒင် သေပြီ ဒါပေမယ့် အကြမ်းဖတ်မှုတော့ ရှင်သန်နေဦးမယ်
What is good things ???
ကျွန်တော် ၏ မှတ်စု
အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရ ရက်များ(ဇွန်မ)
Kyaw Nyo Thaway.
သက်ကြီးပိုင်း ရောက်သည်ထိ ဦးနှောက်စွမ်းအား ထက်မြက်...
သတ္တ၀ါတွေကို သတ်ဖြတ်နေတဲ့ ပလတ်စတစ်